गर्मीमा यस्ता खानेकुरा खानुहोस् : पाचन प्रणालीमा सुधार आउँछ गर्मीमा यस्ता खानेकुरा खानुहोस् : पाचन प्रणालीमा सुधार आउँछ
गर्मीमा यस्ता खानेकुरा खानुहोस् : पाचन प्रणालीमा सुधार आउँछ
प्रकाशकईश्वर रेग्मी — 8/21/2020 07:11:00 am 0
प्रकाशित: भदौ ५,शुक्रबार।
गर्मि मौसममा के खाने ? के नखाने ?
अहिले गर्मि दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। हरेक मौसमका आ-आफ्नै स्वभाव हुँन्छन र त्यहि अनुरुप हामीले आफ्नो खानपिनमा पनि बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुँन्छ। बदलिँदो मौसमअनुसार आफ्नो आहारमा ध्यान पुर्याएमा मात्र हामी स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहन सक्छौँ।
असारदेखि भदौसम्म वर्षा ऋतु चल्ने हुँनाले हाम्रो पाचनशक्ति अलिक कमजोर हुँन्छ त्यसैले हामीले यो ऋतुमा पुरानो चामल,पुरानो गहुँ,खिचडी र हलुका पदार्थहरु सेवन गर्नु पर्दछ।
गर्मि भएको अवस्थामा डिहाइड्रेसन,भोक नलाग्नु र धेरै पसिना आउने कारण शरीरको तापक्रम साधारण रहदैन र विभिन्न रोगहरु लाग्नसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। त्यसैले गर्मीमा कमसेकम ३ देखि ५ लिटरसम्म पानी पिउनु पर्दछ। साथै,आफ्नो हात र शरीरका विभिन्न अंगको सफाईमा पनि बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।
कस्ता खानेकुराहरु खाने ?
* हरियो सिमि,प्याज,तिते करेला,लौका,फर्सी
* बेलको जुस
दही,पानी,काँक्रो,मकै,खर्बुजा जस्ता खानेकुरा खाँदा शरीरका नसा र कोशिकाहरुलाई पानीको मात्राले सिंचित गरिराख्छ र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदैन। सूर्यका हानिकारक विकिरणबाट आँखालाई जोगाउँछ। यसले शरीरलाई उर्जा पानी प्रदान गर्दछ। गाँजर र गोलभेंडाले घामको रापबाट छालालाई डढ्नबाट जोगाउँछ। काँक्राबाट हामीलाई सिलिकाजस्ता तत्व प्राप्त गर्दछन। दहीको सेवनले पाचन प्रणालीमा सुधार आउनुका साथै शुन्दरतालाई प्रवर्धन गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। पुदिनामा भिटामिन 'ए' को मात्रा अत्याधिक हुँने भएकोले यसले हाम्रो शरीरलाई निकै नै फाइदा पुर्याउँछ।
त्यसैगरी हरियो सिमि खानाले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए, सी र बी ६ प्राप्त हुनुका अलावा क्याल्सियम, सिलिकन, आइरन, म्याङनिज, बिटा क्यारोटिन, पोटासियम र कपर तत्व पनि यसमा पाइन्छ। लौकामा करिब ९६ प्रतिशत पानी हुन्छ । लौका चिसो खालको तरकारी हो । यसले कलेजो स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ । गर्मी मौसममा प्याज वरदान नै हो । यसमा भिटामिन सी, भिटामिन बी ६ र म्याङगनिजको मात्रा भरपूर हुन्छ । यसका अलावा क्याल्सियम, आइरन, फोलेट, म्याग्नेसियम, फस्फोरस र पोटासियम पनि पाइन्छ । फर्सी खनिज तत्वले भरपूर हुन्छ । यसले शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ भने एसीडीटी हटाउन र तौल कम गर्न मद्धत गर्छ । यसको बियाँले प्रोस्टेट क्यान्सरका बिरामीलाई फाइदा पुग्छ । यसमा आइरन, म्याग्नेसियम, सेलेनियम र फस्फोरस हुन्छ । गर्मी मौसममा पेट गडबड हुनेहरुका लागि यो निकै राम्रो खाद्यपदार्थ हो ।
बेलको जुस खानुका फाइदाहरु :
* कब्जियतको समस्या समाधान गर्दछ।
* मुटुलाई स्वस्थ राख्दछ।
* पखाला नियन्त्रणमा लाभदायक हुँन्छ।
* कोलस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्दछ।
* रगतलाई सफा गर्दछ।
* सुत्केरी महिलालाई फाइदा पुर्याउँछ।
* क्यान्सरबाट बचाउँछ।
* शरीरलाई भित्रैदेखि चिसो राख्न मदत गर्दछ।
* माछा कम खाने : यसले शरीरलाई हिट बनाउँछ,शरीरबाट पसिनाको मात्रा धेरै निकाली दिन्छ र पाचन
प्रणालीमा नराम्रै असर पार्दछ।
* रातो मासु : यसमा बोसोको मात्रा बढी हुँन्छ जसका कारण गर्मीमा यसले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ।
* अण्डा कम खाने : गर्मीमा यसको सेवनले सल्मोनेल्ला इन्फेक्सन हुँने खतरा हुँन्छ।
* जंक फुड/फास्ट फुड
* मसालेदार खानेकुरा
* बासी सढेगलेका खानेकुरा, धेरै दिनसम्म फ्रिजमा राखेको खानेकुरा, चिल्लो पिरो।
* जाँड रक्सि तथा सुर्तीजन्य पदार्थ।
ईश्वर रेग्मी ( सामाजिक तथा कृषि अभियान्ता )